XOG CUSUB: Labadii Xildhibaan ee Baarlamaanka isku dhex Feeray oo Dagaalkooda sii Xumaaday | Garqaad News Agency
XOG CUSUB: Labadii Xildhibaan ee Baarlamaanka isku dhex Feeray oo Dagaalkooda sii Xumaaday
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa soo kala dhex galay Khilaafyo xoogan oo sabab u noqda inay isku adeegsadaan xiliyada doodaha Baarlamaanka hadalo qalafsan, walow Saxaafada loogu hanjabo in aan hadaladaasi la duubi Karin ama aan la sii deyn Karin.
Wakaakada Garqaad.com ayaa ogaatay inuu sii xumaaday dagaalkii u dhaxeeyay Labada Xildhibaan ee ugu kul kulul Baarlamaanka waa Xildhibaan Mahad Salaad iyo Xildhibaan Cabdi Raxmaan Dheere.
Labadaan Xildhibaan ayaa sida la wada og yahay Xildhibaanada Hortooda isku feeray, waxaana dagaalkaasi uu sababay in Xildhibaanada ay la kala saftaan taasoo abuurtay xiisad kulul oo ilaa iyo hada aan xal laga gaarin.
Sababaha ugu waa weyn ee xiisada loo dajin la’yahay ayaa lagu sheegay Xildhibaan Mahad Salaad oo ku andacoonaya inuu raali galin siiyo Cabdi Raxmaan Dheere maadaama uu isaga feeray.
Laakiin Xildhibaan Dheere ayaa biyo diidan inuu raali galin ka bixiyo dagaalka uu bilaabay, isagoo sheegay in Mahad Salaad ay tahay in laga qabto Xildhibaanada Baarlamaanka.
Qaar ka mid Mudanayaasha Baarlamaanka ayaa hada wada qorshe ay iskugu soo hor fariisinayaan Xildhibaanadan is feeray, si loo soo gaba gabeeyo dagaalka u dhaxeeya.
Ciidamada AMISOM ayaa kala dhex gala Xildhibaanada oo inta badan si caro ay ka muuqato u dooda ka dibna dagaal gacan ka hadal uu dhex maro, inkastoo Warbaahinta loogu hanjabo inaysan shacabka u soo bandhigin dhacdooyinkaan oo kale.